तपाईंको आजको राशिफल /वि.सं. २०७५ साल पुस २६ गते। बिहिबार। | Ekhabar Nepal
तपाईंको आजको राशिफल /वि.सं. २०७५ साल पुस २६ गते। बिहिबार।
धार्मिक पौष २६ २०७५ ekhabarnepal
वि.सं. २०७५ साल पुस २६ गते। बिहिबार। इश्वी सन् २०१९ जनवरी १० तारिख।
सरसापटमा पनि धन बाहिरिने सम्भावना देखिन्छ। विवादास्पद कामलाई टुंगो लगाउँदै लोकप्रियता हासिल गर्न सकिनेछ। आफ्नो क्षेत्रमा नाम र दाम कमाउने समय छ। शुभचिन्तकहरूको सहयोग जुट्नाले मनग्य फाइदा हुनेछ। मध्याह्नदेखि आम्दानी बढ्नेछ। मेहनत गर्दा आम्दानीका नयाँ स्रोतसमेत फेला पर्नेछन्। तर पुरानो समस्याले खर्च गराउन सक्छ।
मेहनतले लक्ष्यमा पुर्याउनेछ। दैनिकीमा परिवर्तन आउनेछ। व्यापारमा मनग्य लाभ हुनेछ।अवसर प्राप्त भए पनि अवसरवादीहरूले फसाउने चेष्टा गर्नेछन्। होसियारीसाथ काम लिँदा फाइदा हुनेछ। बोल्नुभन्दा बुद्धिको उपयोगले काम लिने चेष्टा गर्नुहोला। मध्याह्नदेखि स्थितिमा सुधार आउनाले चिताएको काम सम्पादन हुनेछ। कामले नाम र दाम दिलाउनेछ।
न्यून उपलब्धिमा चित्त बुझाउनुपर्ने परिस्थिति देखिन्छ। स्वास्थ्यका लागि आहारविहारमा ध्यान पुर्याउनुहोला।स्वास्थ्य कमजोर रहनाले चिताएको काम पूरा गर्न नसकिएला। जिम्मेवारी बढे पनि काम बिग्रने भयले सताउनेछ। मध्याह्नदेखि स्थितिमा सुधार आउनाले समुदायको हितमा काम गर्न सकिनेछ। अप्ठ्यारा परिस्थिति सुल्झाएर पनि फाइदा उठाउन सकिनेछ।
प्रतीक्षित नतिजा कमजोर देखिनाले काम दोहोर्याउनुपर्ला। स्वास्थ्यका कारण न्यून उपलब्धिमा चित्त बुझाउनुपर्ला। घुमफिर तथा मनोरञ्जनको समय छ। अतिथिका रूपमा सत्कार पाइनेछ। आफन्तसँग सुमधुर सम्बन्धका लागि व्यवहारमा ध्यान पुर्याउनुहोला। मध्याह्नदेखि स्वास्थ्यमा कमजोरी र काममा चुनौतीको समय रहनेछ। चिताएको काम रोकिन सक्छ।
केही चुनौती देखिए पनि मेहनतले प्रतिस्पर्धाको दौड जिताउन सक्छ। लोकाचारले फजुल खर्च गराए पनि प्रयत्न गर्दा लक्ष्यमा पुग्न सकिनेछ। भौतिक साधन जुट्नाले दिगो काम सुरु गर्न सकिनेछ। अधिकार र प्रतिष्ठा जोगाउन सफल भइनेछ। मध्याह्नदेखि रमाइलो जमघटमा सहभागी भइनेछ। प्रियजनसँग भेटघाट हुनेछ भने अतिथिका रूपमा सम्मान प्राप्त हुनेछ।
बौद्धिक अभिव्यक्तिको प्रभाव बढ्नेछ। आफ्नो मेहनतबाट अरूले फाइदा उठाउने कोसिस गर्नेछन्। तापनि तारिफयोग्य काम गर्दै धेरैको उपकार गर्न सकिनेछ। बुद्धिको उपयोगले लक्ष्य प्राप्त हुनेछ। मध्याह्नदेखि नयाँ कामतर्फ अग्रसर भइनेछ। आम्दानीका स्रोत बढ्नेछन्। प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ। व्यापारलगायत आर्थिक लाभ हुने काम प्रारम्भ हुनेछ।
बेसुरमा बोल्ने बानीले पनि दु:ख पाइनेछ।हतारमा निर्णय लिँदा काम बिग्रन सक्छ। तत्कालको फाइदा हेर्दा पछिलाई समस्या पर्नेछ। मध्याह्नदेखि बौद्धिक कलाको प्रभाव बढ्नेछ। बुद्धिको उपयोगले लक्ष्य प्राप्त हुनेछ। आम्दानीका स्रोत बढ्नेछन् भने दिगो काम प्रारम्भ गर्ने समय छ। अध्ययनमा प्रगति हुनुका साथै अनुभवलाई पनि निखार्ने अवसर प्राप्त हुनेछ।
कमजोर मानसिकताले पछि परिनेछ। अरूका काममा धेरै समय बित्नेछ।व्यवधानका बाबजुद आँटेको काम सम्पादन हुनेछ तर आफ्नो मेहनतबाट अरूले फाइदा उठाउने कोसिस गर्नेछन्। मध्याह्नदेखि थीभाइसँग सन्तुलित व्यवहार गर्नुपर्ला। बेसुरमा काम गर्ने बानीले मेहनत खेर जानेछ। पुरानो गतिले पनि काम बिग्रन सक्छ। आफन्तबाट टाढिनुपर्ला।
मिहिनेतले राम्रो उपलब्धि दिलाउनेछ। सानो प्रयत्नले फाइदा बढ्नेछ।बोलीको भरमा चिताएको काम सम्पादन हुनेछ। तारिफयोग्य कामले प्रशंसकहरू बढ्नेछन्। विचारले अरूको ध्यान तान्न सकिनेछ। दिउँसोतिर व्यापारमा पनि प्रशस्त लाभ हुनेछ। कामको लगावले मनग्गे धन आर्जन हुनेछ। विभिन्न भौतिक साधन संग्रह गर्ने मौका छ। व्यापारमा फाइदा हुनेछ।
ईर्ष्या गर्नेहरूको मनोबल कमजोर हुनेछ। सानो प्रयत्नले ठूलो फाइदा दिलाउनेछ।विभिन्न अवसर प्राप्त हुनुका साथै दैनिकीमा परिवर्तन आउनेछ। हिम्मतले काम बनाउन सकिनेछ। दीर्घकालसम्म फाइदा हुने काम प्रारम्भ गर्न सकिनेछ। उपलब्धिले थप उत्साह जगाउनेछ। दिउँसोतिर बोलीको भरमा काम बन्न सक्छ। तार्किक क्षमताले मानसम्मान र फाइदा दिलाउनेछ।
अरूको विश्वासमा पर्दा धोका हुन सक्छ। टाढाका साथीभाइसँग सम्पर्क बढ्नाले यात्रा सम्भावना देखिन्छ।बिहान खर्च बढ्नुका साथै अर्थअभावले सताउन सक्छ। फाइदाका लागि दोहोर्याएर प्रयत्न गर्नुपर्ला। दिउँसोतिर परिस्थिति अनुकूल बन्नाले महत्त्वाकांक्षी काम गर्न सफल भइनेछ। तारिफयोग्य कामले प्रशंसक बढ्नेछन्। ज्ञान, कला र व्यक्तित्व निखार्ने समय छ।
उद्योग र व्यापारमा विशेष फाइदा हुनेछ। दिउँसोदेखि खर्च बढ्नाले अर्थ संग्रहमा बाधा पुग्नेछ। आम्दानीका नयाँ स्रोत फेला पर्नेछन्। प्रयत्न गर्दा दिगो काम प्रारम्भ हुन सक्छ। स्रोत–साधन जुट्नाले गरिएका कर्मको उचित प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। बसाइको स्थानान्तरण वा टाढाको यात्रा हुने सम्भावना देखिन्छ। परिस्थितिअनुसार चल्न नसक्ता अलि दु:ख पाइनेछ।